NCS Sheffield - Element Society Information Program
Joyina NCS Sheffield inoshandiswa neElement Society nhasi!
SVIDZAI YAKO SPOT
Usapotsa mukana wako wekuita neCSS.
Mune imwe nguva inoshamisa yezhizha, iwe uchagara kure nemusha, udzidze unyanzvi kuti uwedzere CV yako, uye usangana nevanhu vanoshamisa iwe usambokanganwa. Saka iwe uri kumirira chii? Shanduko inotanga paIYO!
SIGA 1: GADZANA
Kutanga, iwe uchapedza nguva kure nemusha unonakidzwa nemitambo-yakatungamirirwa kunze kwekuita.
Iwe uchasungwa pamwe nevatambi pamwe navo muchitambo chekuita-chengetedza pane imwe nzvimbo yekuvhima kwekunze kwekuita zvinhu zvakadai sekukwira kwedombo, kufamba, ngarava, uye kupfura.
SIGA 2: GETEI
Pedyo neimba, boka rako richapedza nguva yekudzidza nezveunharaunda yako.
Iwe uchasangana nevanhu vanobva mumabhizimisi emunharaunda uye masangano emunharaunda ayo achakubatsira iwe nevanoshanda navo veCNS kukudziridza unyanzvi hutsva.
CHIKAMU 3: ITA MAKO AKO
Iwe uchashanda muboka rako kuronga nekukandira mari yekuita yako purojekiti yako yemagariro inogona kuita mutsauko chaiyo kune waunogara.
Iwe uchazoita chikwangwani chako munharaunda yako, uchiendesa purojekiti yako yekuita nekambani yako.
Ezvo GADZA ...
Pakupedzisira, kana wapedza chirongwa chako chekugara, ino nguva yekupemberera pa kupedza chikamu.
Iwe uchagamuchira chigwaro chakasayirwa naHurumende uye kuwana mikana yakasiyana-siyana yekuramba uchizvipira uye kuramba uchibatana neunharaunda yako uye NCS.
Shandura KUTAURA KWAKO MAZUVA ANO
NCS chete vhiki dzekupedzisira dze4, ine kuputika pakati, saka pane nguva yakawanda yemimhanzi yemitambo uye yezororo yemhuri. Zvose zvenyika yeCCS inodhura £ 50 chete, kusanganisira zvokudya, mabasa, uye hogara, uye rubatsiro rwemari ruwanika zvakare. Ita NCS chikamu chezhizha rako!
* Purogiramu yakapiwa neElement Society haizokubhadhara kupfuura £ 50, nekutsigirwa kwemari inowanikwa kana inoda *
Element Society inopa zvirongwa zveNCS gore rese. Zvirongwa zvinogona kusiyana zvichienderana nekuti iwe unobatanidzwa nei, uye panguva ipi pagore raunotora chikamu, saka iva nechokwadi chekutarisisa chaicho chinangwa chako chakasarudzwa chinosanganisira.
Kuti uwane mamwe mashoko, titirei pa 0114 2999 210, kana kutumira e-mail yedu NCS Team ncs@elementsociety.co.uk
*** Iva nechokwadi chokuti unosarudza Element semupi wako kuti atore £ 15 yako discount online! ***